Louisiana ubukeka zokuthuthukisa China yayo ukuhweba - China Yangzhong Luck Star ukubekwa uphawu
Pushing Ubuchwepheshe emafutheni, ukukhiqizwa zamakhemikhali, ebheka phambili zezindiza kanye nezindiza mkhathi
Louisiana ufuna parlay izimfanelo zayo e uwoyela negesi yemvelo kanye ukukhiqizwa chemical ku enwetshiwe zokuhweba izibopho China, ngokuvumelana phezulu olusemthethweni ukuthuthukiswa komnotho yembuso.
Don Pierson waqokwa unobhala Louisiana koMnotho lapho uJohane Bel Edwards ebe umbusi ngoJanuwari. Pierson wathi isimo uhlose ukwakha ku izimboni zayo zendabuko - amandla futhi ukukhiqizwa chemical, ezamahlathi kanye nokukhiqiza.
"Singabantu unethemba amukele amathuba esizayo zezindiza kanye nezindiza mkhathi, IT kanye nokuphathwa kwamanzi," esho ngesikhathi enengxoxo eNew York ngoLwesibili.
Trade phakathi Louisiana futhi China ubelokhu elichumayo. Kusukela ngo-2008, Louisiana uye zibalwa kuqala e-US e lengenako angaphandle utshalomali ngqo, kanye nezinkampani zaseChina nendima enkulu.
IChina zimali lesibili ngobukhulu Louisiana.
China limelela emakethe Louisiana sika ukuthekelisa phezulu, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka $ 8.6 billion ngonyaka nokuthengiswa ngo-2014, simo Louisiana Cha 4 phakathi US uthi emazweni angaphandle oya ezwekazini.
Pierson wathi kukhona izindawo ezimbili babonakala ikakhulukazi ethembisa ukunweba ukuhweba phakathi isimo kanye China. Esinye sazo esikhiqiza feedstock chemical efana methanol, edingekayo ukuze akhiqize imikhiqizo yamakhemikhali.
Enye kuhilela ukukhiqizwa kuncibilike igesi yemvelo, noma LNG, okudaliwe lapho igesi yemvelo ihamba selehlile lokususa 259 degrees Celsius ngaphansi kwezinga.
Ngo-2014, Louisiana kuvikelwe investimenti ye $ 1.85 billion Shandong Yuhuang Chemical Co ukuthuthukisa isitshalo methanol eLouisiana sika St James Parish. Lesi sikhungo, okuyinto kulindeleke ukuthi sidale amathuba 400 abaqashwe ngokugcwele kanye nemisebenzi ukwakhiwa mayelana 2,000 yesikhashana, kusakhiwa.
"Silindele ukuthi luzofika elayinini bese uqalisa ukukhiqizwa e 2017," kuqhuba yena.
Nakuba uwoyela negesi yemvelo amanani aphansi ithiye ukukhiqizwa isimo sika amandla, amanani Uyi sangaleso ibhizinisi zamakhemikhali.
"I iconsi kwamanani kawoyela ishayé ezinye izindawo Louisiana kanzima njengathi inombolo ezimbili umkhiqizi uwoyela negesi yemvelo e-US," kusho Pierson.
"Kodwa amanani aphansi futhi ukudala ithuba, ngoba uwoyela negesi kukhona feedstock ekukhiqizeni zamakhemikhali zisetshenziselwa amandla isikhungo ekhiqiza i feedstock."
Umnotho China ezikhulayo kuzodinga feedstock imikhiqizo zamakhemikhali, kanye nendawo Louisiana wezolimo phezu eGulf of Mexico kuyokwenza kube lula amafemu Chinese ukusungula ukukhiqiza ezifundeni bese ngomkhumbi umkhiqizo emuva China ngokusebenzisa inethiwekhi iphayiphi isimo noma komunye kwamachweba yayo, wathi Pierson.
Uhlelo port Louisiana sika kwezinkulu kunazo zonke emhlabeni, ngobukhulu 27 deepwater futhi angajulile okusalungiswa nezimbobo.